Taunggyi - The Cherry Land: Taunggyi IT vs Cities IT
ရေးသားသူ yma အချိန် 1:09:00 PM
Friday, November 30, 2007 3:48:00 PM
အထင်ကြီးပါတယ်...။တောင်ကြီးကို...။ local ကလည်းအားပေးခဲ့ပါတယ်...။ ချီးကျူးပါတယ်...။ တော်ကြပါပေတယ်...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
My husband and I are not only impressed but amazed at the level of expertise that the IT group demonstrated through the webcast of Tazaungdaing festival.
I recently attendedaWeb Seminar (or Webinar as they call it here) at my office in California and I was almost bored to death because it's more like teleconferencing with slide shows.
Many high tech companies here in the States outsourcealot of IT jobs overseas, especially to India and China. I am sure that the IT professionals from Taunggyi are more than capable of meeting challenging tasks.
Keep up with the good work and we look forward to more web casting from Taunggyi.
Saturday, December 01, 2007 1:54:00 PM
အရင်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်ရပြီဆိုတုန်းက တောင်ကြီးမှာ မရခဲ့တာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိသေးတယ်။ နယ်မြို့ကြီး နှစ်မြို့မှာ အင်တာနက်၊ ကွန်ပြူတာကို လူငယ်တွေ စသုံးနေချိန်မှာ တောင်ကြီးက လူငယ်တွေ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ မင်းလမ်းတစ်လျှောက် ကလေရိုက်နေကြပြီလားလို့လဲ ထင်ခဲ့ဖူးတယ်..
တောင်ကြီးလူငယ်တွေ မညံ့ကြောင်း အမြင်ရှင်းအောင် တောင်ကြီးချယ်ရီမြေက ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကြီးလူငယ်တွေ နောက်မကျကြောင်း အခုတန်ဆောင်တိုင်လိုက်ဖ်ပွဲက သက်သေပါ..
တောင်ကြီးသားတွေကို ဂုဏ်ယူမိသလို တောင်ကြီးသားတစ်ယောက် ဖြစ်ရတာကိုလဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ တောင်ကြီးသားတွေ စည်းလုံးတာကတော့ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး.. ဟိုးအရင်ကတည်းကပါ။
ရှေ့ကိုဆက်တက်ပါ.. လမ်းစရှိပြီဆိုရင် ခရီးက မဝေးပါဘူးတဲ့..
ကျေးဇူးပါ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေး)
Sunday, December 02, 2007 12:20:00 AM